Buy methylprednisolone powder (83-43-2) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Anabolika Steroids / Methylprednisolone vovoka
SKU: 83-43-2. Sokajy: Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny methylprednisolone vovoka (83-43-2), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Lahatsary vovoka methylprednisolone
Methylprednisolone vovoka ireo karazana fototra
Name: Methylprednisolone vovoka
Formula Molecular: C22H30O5
Meny fitetezana 374.47
Methylprednisolone vovoka amin'ny tsingerin'ny taovam-pambolena
Famonoana anarana: Molyprednisolone, Medrol, Medrol Dosepak, Methylpred-DP
Brand Names: Vovoka methylprednisolone, Solu-Medrol, Poopy Depo-Medrol, 83-43-2
Fampiasana vovoka methylprednisolone
Ny tabilao MEDROL dia ahitana voanio methylprednisolone izay glucocorticoid. Ny glucocorticoids dia steroids adrenocortical, na ny voajanahary sy ny synthetic, izay mora entina avy amin'ny tranombokin'ny gastrointestinal. Ny moka manify methylprednisolone dia mipoitra toy ny fotsy amin'ny fotsy volo fotsy, tsy misy sakay sy krystalline. Mora be dia be amin'ny alikaola, amin'ny dioxane, ary amin'ny metanôl, latsaka kely ao amin'ny acetone, ary amin'ny chloroform, ary kely be loto amin'ny eter. Mazava ho azy fa tsy voapoizina ao anaty rano izany. Ny tablette MEDROL (methylprednisolone) dia ny tabilao 2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg na 32 mg methylprednisolone.
Raiso vovoka moloprednisolone amin'ny vavan'ny dokotera, matetika amin'ny sakafo na ronono. Araho tsara ny torolalana azonao. Ny dosage sy ny halavan'ny fitsaboana dia mifototra amin'ny toe-pahasalamanao sy ny valin'ny fitsaboana. Samihafa ny famarotana fanafody ho an'ity fanafody ity. Raha tsy mandray ny doka mitovy isan'andro ianao na mandray izany fanafody izany isan'andro, dia mety hanamarika ny kalandrie miaraka amin'ny fampahatsiahivana. Jereo ny dokotera na ny pharmacista raha manana fanontaniana ianao.
Aza mampitombo ny dosie voadio methylprednisolone na ampiasao ity fanafody ity matetika kokoa na ho ela kokoa noho izay voasoratra. Ny fahasalamanao dia tsy hanatsara ny haingana, ary hitombo ny fiakatranao ny fiantraikany.
Ny dosie voalohany Medrol (methylprednisolone dosage dosage dosage) dia mety miovaova amin'ny 4 mg ka hatramin'ny 48 mg ny methylprednisolone poids isan'andro noho ny aretina voafaritra manokana. Ao anatin'ny toe-javatra tsy dia misy fahasamihafana loatra ny dosage amin'ny ankapobeny raha ampy ho an'ny marary voafantina ny dingana voalohany azo atao. Ny dòz voalohany dia tokony ho voatazona na ampifanindry mandra-pahamarinana ny valiny mahafa-po. Raha toa ka misy tsy fahampian'ny valim-panontaniana mahafa-po, aorian'ny fotoana mety, dia tokony hajanona ny MEDROL (methylprednisolone) ary halefa amin'ny fitsaboana mety ny marary.
Raha tokony hanantitrantitra fa ny fangatahana dosage dia variabale ary tsy maintsy aseho manokana noho ny aretina eo ambany fitsaboana sy ny valin'ny marary. Rehefa voamarikao tsara ny valiny, dia tokony ho faritana amin'ny alalan'ny fihenan'ny dosage voalohany amin'ny fitsaboana kely amin'ny fitsaboana kely amin'ny fotoana mety ny fitsaboana araka ny tokony ho izy, mandra-pahatongan'ny dosia ambany indrindra izay hihazona valim-pitsaboana ampy. Tokony hotadidinina ao an-tsaina fa ilaina ny fanaraha-maso tsy tapaka ny fanafody. Anisan'ireo toe-javatra mety hahatonga ny fanitsiana ny dosage ilaina dia ny fiovana eo amin'ny toeram-pitsaboana amin'ny ambaratonga faharoa amin'ny famoahana na fihanaky ny aretina, ny faharetan'ny olan'ny marary ary ny fiantraikan'ny faharetana amin'ny toe-javatra mampikorontan-tsaina izay tsy mifandray mivantana amin'ny aretina eo ambany fitsaboana; Ao amin'io toe-javatra farany io dia mety ilaina ny mampitombo ny fatran'ny MEDROL (methylprednisolone poids bronteur) mandritra ny fe-potoana mifanaraka amin'ny toe-pahasalaman'ny marary. Raha aorian'ny fitsaboana maharitra ny fitsaboana dia tokony asiana tsindrona tsikelikely fa tsy tampotampoka.
Fampitandremana amin'ny poety methylprednisolone
Alohan'ny handraisanao ny vovony methylprednisolone,
1) dia lazao amin'ny dokotera sy ny pharmacist raha tsy mahazaka ny vovony methylprednisolone, aspirine, tartrazine (loko mavo amin'ny sakafo sasany sy zava-mahadomelina), na zava-mahadomelina hafa.
Xemum) dia milaza ny dokotera sy pharmacista anao ny dokotera sy medikaly tsy azonao atao, indrindra ny antikoagulants ('blood thinners'), toy ny warfarin (Coumadin), medicines arthritis, aspirine, azithromycin (Zithromax), clarithromycin (Biaxin), cyclosporine (Neoral, Sandin-dipoavatra, dioxin (lanoxine), diéretik ('pills water'), erythromycin, estrogen (Premarin), ketoconazole (Nizoral), mpanohitra fanabeazana, phenobarbital, phenytoin (Dilantin), rifampin (Rifadin), teophylline (Theo-Dur) ary vitamina.
3) raha misy fanafody fanosotra (afa-tsy amin'ny hoditrao), aza mividy môterina môsyprednisolone raha tsy miresaka amin'ny dokotera.
4) dia lazao amin'ny dokotera raha manana na nanananao ny atiny, ny voa, ny tsinay, na ny aretim-po; diabeta; dratsin'ny tiroida; drà avo; aretina ara-tsaina; myasthenia gravis; ny fahosan'ny taolana; Ny aretim-pisefoan'ny maso; nifanintona; tuberculosis (TB); na fery.
5) dia lazao amin'ny dokotera raha bevohoka ianao, miezaka ny ho bevohoka na hiteraka. Raha bevohoka ianao rehefa maka volo methylprednisolone, miantsoa ny dokotera.
6) raha toa ka misy fandidiana, anisan'izany ny fandidiana, dia lazao amin'ny dokotera na ny dokotera fa ianao dia maka vovoka methylprednisolone.
7) raha manana tantara momba ny fery maloto ianao na mahazo diplaoma betsaka amin'ny aspirine na fanafody arthritis hafa, mametra ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola rehefa mandray ity fanafody ity. Ny poety methylprednisolone dia mahatonga ny vavoninao sy ny tsinainao ho mora kokoa amin'ny voka-dratsin'ny alikaola, aspirine, ary ny fanafody araritaly sasany. Io fiantraikany io dia mampitombo ny fatran'ny gaza.
Ny poety methylprednisolone dia an'ny kilasy misy zava-mahadomelina antsoina hoe glucocorticoids. Ny karazana fanafody dia vondrona fanafody izay miasa amin'ny fomba mitovy. Ireo fanafody ireo dia matetika ampiasaina amin'ny fitondran-tena mitovy.
Ny methylprednisolone poopy dia miasa amin'ny fihenan'ny fiterahana ary manova ny valim-panafahan'ny vatana. Izany dia mampihena ny fiterahana vokatry ny toe-javatra misy anao.
Ny môtera môtera prednisolone dia ampiasaina mba hahatratrarana ny fanafoanana haingana ny fiterahana. Ohatra momba ny toe-piainana fampijaliana izay ampiasain'ny methylprednisolone vovoka:
- Ny aretin'i Crohn.
Ny fahasamihafan'ny fahasalamana tsy mahazatra izay tsy mahazatra ny fitsaboana dia mety hamaly ny môtera méticprednisolone. Ohatra amin'izany ny:
- rhinitis isan-karazany,
drizareo mampihorohoro, ary
-kontana sy ny atmôsia.
Ny toetry ny hoditry ny hoditra natao tamin'ny methylprednisolone dia nampidinina:
-severe psoriasis ary
Ny fahasalaman'ny alika sy ny hafetsenan'ny uvea, iris, conjunctiva ary ny ranomason'ny maso dia mifangaro amin'ny môlda methylprednisolone.
Ny methylprednisolone vovoka dia ampiasaina amin'ny fitondran-tena sy ny sklerose maromaro na dia mampiady hevitra aza ny fampiasana azy ireo.
6. Methylprednisolone ronono vovony Recipes:
Methylprednisolone Rohaner Rohstoff Marketing
Ahoana no hividianana vovoka methylprednisolone avy ao AASraw
Methylprednisolone ronono vovony Recipes:
Methylprednisolone poids: Uses, Dosage, Side effects, Overview & more